‘जो हमसे टकराएगा ओ चुरचुर हो जायगा’ भन्ने माधवको हिन्दी डाइलगमा ओलीले फर्काए यस्तो मुखतोड जवाफ !
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालले हिन्दी फिल्मका भिलेनको डाइलग बोलेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।
बुधबार, मंसिर ८, २०७८ ७:१०
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालले हिन्दी फिल्मका भिलेनको डाइलग बोलेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । उनले माधव नेपाललाई हिन्दीमै कडा शब्दमा जवाफ फर्काएका हुन् । कांग्रेसका पिछलग्गुले एमालेलाई धाक दिन नसुहाउने उनको भनाइ छ । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
पार्टीको साइबर सर्कल घोषणा गर्दै ओलीले भने, ‘कतिले ठानेका छन् अदालतको फैसलाबाट जनताका पक्षधरलाई पराजित गरियो । अन्तिम विजय ठानेका छन् । केही व्यक्तिहरुले बोल्दै हिँडको सुन्नुभएको होला । विभिन्न कुराहरु बोल्दै हिँडेका छन् ।
एकजना सात वर्षजति अगाडि अध्यक्षको चुनावमा मसँगै पराजित भएको मान्छेले हिन्दी फिल्मको भिलेनको डाइलग बोलेछन् । के भनेछन् भने– जो हमसे टकराएगा ओ चुरचुर हो जायगा । सात वर्ष अगाडि हारेको मान्छे । त्यसबेला को चुरचुर भएको थियो ? मलाई अचम्म लाग्यो । कसरी बोल्न सक्या होला ।’
कांग्रेसको पुच्छर समातेर धेरै फुर्ति नलगाउन ओलीले चुनौति दिए ।
उनले भने, ‘यिनीहरु दुई चार दिनका मेहमान हुन् । अहिले कांग्रेसको पुच्छर समातेर बडा फुर्ति लगाइरहेका छन् । पिठ्यूमा झिँगो बसेर कांग्रेसले यसो पुच्छर हल्लायो भने यिनीहरु कहाँ पुग्छन् कहाँ । कांग्रेसका पुच्छरले यत्रो धाक लगाउने एमालेसँग ?
नेपाल अन्लाईन पत्रिकामा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई nepalonl[email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।